खुल्लामन्च: अल्छि, खल्ति र बल्छि :
अल्छी , रित्तो खल्ती हुदै बल्छी सम्म ल्याएर कुरो टुंग्याउनु भएको रहेछ ...साच्ची मेरो पनि कथा उस्तै छ ....
यता हाम्रो यस्तो जात्रा छ - गोकुल दाइ ! तर मुलुकामा ...गाइ जात्रै गाइ जात्रा रहेको छ !
मलाई त लाग्यो यो सत्यता तपाई हाम्रो मात्र नभई लाखौ नेपालीको जस्तो । यसरि ढिलो नै भएपनि ब्लगमा मिठा कुराहरु पढन पाइयोस ।
तपाईँको अरु लेखहरुमा जस्तै यसमा पनि भावना मात्रै हैन्, सुलभ सत्य पनि झल्कन्छ।
यो सबै पढेपछि एउटा कुरा लेख्न मन लाग्यो :
खल्ती खाली भए पनि लेख्न सकिन्छ, तर खल्ती नै खाली हुने गरी भने लेख्न हुँदैन
यति भन्दा भन्दै पनि फेरि अर्को एक लाईन पनि लेख्छु:
तर समय र परिस्थितिले साथ दिँदा भने लेख्दै गर्नु होला, किन कि तपाईँको लेख्ने शैली म र म जस्तै धेरै जनालाई पक्कै मन पर्छ ।